बैंकहरुले धमाधम जारी गर्दैछन् डलर कार्ड : यसले कसरी काम गर्छ ? बैंकहरुले धमाधम जारी गर्दैछन् डलर कार्ड : यसले कसरी काम गर्छ ?
बैंकहरुले धमाधम जारी गर्दैछन् डलर कार्ड : यसले कसरी काम गर्छ ?
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स — 3/29/2021 09:47:00 am 0
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुले धमाधम डलर कार्ड जारी गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरुले धमाधम डलर कार्ड जारी गर्न थालेका हुन्। राष्ट्र बैंकको यसअघिको व्यवस्था अनुसार डलरमा खाता भएकाले मात्रै विदेशमा डलरमा भुक्तानी गर्न सक्थे । तर, राष्ट्र बैंकले सहज व्यवस्था गरेपछि बैंकहरु यस्तो कार्ड जारी गर्न आकर्षित देखिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले गरेको सहज व्यवस्थासँगै माछापुच्छ्रे बैंक,नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक,नबिल बैंक, एनएमबि बैंक र सिद्धार्थ बैंक लगायतका बैंकले यस्तो कार्ड जारी गरिसकेका छन् । अन्य बैंकहरुले पनि जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।
शुक्रवार माछापुच्छ्रे बैंकले स्मार्ट डलर कार्ड संचालनमा ल्याएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकमा खाता भएका ग्राहकहरुले आफ्नो प्यान कार्ड पेस गरि अमेरिकी डलर ५०० बराबरको कार्ड प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सो कार्ड मार्फत भारत बाहेक विश्वका अन्य मुलुकबाट वार्षिक अधिकतम अमेरिकी डलर ५०० बराबरको इकमर्स साइट मार्फत अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिनेछ । बैंकका अनुसार आफने कार्ड मार्फत ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरि एक बर्षमा अमेरिकी डलर ५०० बराबर को कारोबार गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी, शुक्रवार नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि ‘एनआईबीएल भी–प्रिपेड इन्टरनेशनल कार्ड’ को सुरुवात गरेको छ । बैंकले भर्चुअल कार्डमार्फत ग्राहकहरूले अमेरिकी डलरको एनपीआरमा परिवर्तन गर्न सक्नेछन् बैंकका ग्राहकले ५०० अमेरिकी डलर बराबरको इकमर्स भुक्तानी गर्न सकनेछन् । बैंकले वार्षिक रुपमा ५०० डलर बराबरको खरिद गर्न पाउनेछन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई ३५ दिन ३५ प्रतिशत छुट सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै, ग्लोबल आइएई बैंकले बिहिवार ‘ग्लोबल ईकम डलर कार्ड’जारी गरेको छ । यस कार्ड मार्फत् विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद वापतको भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यस कार्डबाट नेटफ्लिक्स रिचार्ज, शैक्षिक शुल्क भुक्तानी गर्न तथा युट्युब, फेसबुक, ट्वीटर,वाट्सअप लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले जारी गरेको यस्तो कार्डबाट भारत बाहेक अन्य मुलुकबाट अनलाइनमार्फत सामान खरिद गरेर अनलाईनमार्फत भुक्तानी गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै,नबिल बैंकले मंगलवारदेखि ‘यूएस डलर नबिल आईकार्ड’ जारी गरेको छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न मिल्ने ‘नबिल आईकार्ड’ ल्याएको हो । बैंकमा खाता हुने ग्राहकहरुले डलर कार्डमार्फत वार्षिक अधिकतम ५०० डलर सम्मको ई–कमर्शमार्फत अनलाइन सपिङ गर्न सक्नेछन् । बैंकको यो व्यवस्था भारत बाहेक अन्य मुलुकमा लागु हुनेछ । डलर कार्ड लिन खातासंगै प्यान कार्ड पनि अनिवार्य आवश्यक पर्ने बैंकले जनाएको छ । नेपालको इतिहासमा नबिलले नै डिजिटल बैंकिङ्ग कारोबारको शुरुवात गरेको थियो ।
त्यसैगरी, एनएमबि बैंकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रिपेड कार्ड जारी गर्न गरेको छ । यस्तो कार्ड दिन ग्राहकले अनिवार्य रुपमा केवाईसी भरेको तथा प्यान नम्बर लिएको हुनुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, सिद्धार्थ बैंकले पनि सिद्धार्थ इकम कार्ड जारी गरेको छ । बैंकले विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्न सहज, आधुनिक र विश्वस्तरिय बनाउन शुक्रवार (चैत १३ गतेदेखि) सिद्धार्थ इकम कार्ड संचालनमा ल्याएको हो । सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकहरुले नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकी डलर ५०० वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सटही गरेर सिद्धार्थ नेपालबाटै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । प्रयोगकर्ताले एकै पटक वा पटक–पटक गरी एक वर्षमा बढीमा अमेरिकी डलर ५०० वा सो बराबरको परिवत्र्य मुद्रा जम्मा गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । साथै यस्तो कार्ड लिन ग्राहकले केवाइसी (ग्राहक पहिचान विवरण) अद्यावधिक भएको र स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा लिएको हुनुपर्नेछ ।
बैंकहरुले डलर कार्डको सुरुवात गरेपछि आम ग्राहकलाई निकै सहज हुने भएको छ । बैंकका ग्राहकहरुले अब विदेशमा कुनै सामान खरिद गर्नुप¥यो भने सहज रुपमा डलरमा आफ्नै कार्डबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भए । अबदेखि डलर कार्ड हुने बैंकका ग्राहकहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो व्यवसायलाई आफैले भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । साथै उनीहरुले आफ्नो व्यवसायलाई तत्कालै भुक्तानी गरी प्रवर्धन गर्न सक्नेछन् । साथै,बैंकका ग्राहकले नेटफ्लिक्स, अमेजन लगायतका प्लेटफर्मको भुक्तानी पनि आफ्नै कार्डबाट गर्न सक्नेछन् । तर बैंकले उपलब्ध गराएको यस्तो डलर कार्डमार्फत विदेशी वस्तु तथा सेवाको खरिदको भुक्तानी बाहेक अन्य कारोबारका लागि भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था बैंकहरुले गरेका छन् । यस्तो कार्डमार्फत सपिङ्ग, शिक्षा लगायको भुक्तानी गर्न सकिने बैंंकले जनाएका छन् ।
यसरी लिनुहोस् डलर कार्ड ?
बैंकहरुले जारी गर्ने यस्तो डलर कार्ड लिन सबैभन्दा पहिले सो बैंकमा खाता अनिवार्य रुपमा खोलिएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, ग्राहकले केवाइसी समेत भरेको तथा अद्यावधीक गरेको हुनुपर्नेछ । ग्राहकले बैंकमा ग्राहक पहिचान पत्र समेत भरेको हुनुपर्नेछ । यसका साथै डलरकार्ड लिन प्यान नम्बर समेत अनिवार्य आवश्यक पर्छ । नयाँ ग्राहकले यस्तो कार्ड लिनुपरेमा सुरुमा बैंकमा खाता खोल्ने र केवाइसी भर्ने । त्यसका साथै प्यान नम्बर पनि लिने । त्यसपछि यस्तो कार्ड लिन सकिन्छ । यस्तो कार्ड लिँदा बैंकले निश्चित शुल्क लिन्छन् । बैंकहरुले लिने शुल्क भने फरक फरक हुन सक्नेछ । ग्लोबल आइएमई बैंक,नबिल र एनएमबी बैंकको यस्तो कार्डको शुल्क ५०० रुपैँया रहेको छ ।
दुरुपयोग गर्दा यस्तो छ कानुनी कारवाही
बैंकहरुले जारी गर्ने यस्तो कार्डको दुरुपयोग गर्न पाइने छैन । ग्राहकले अफ्नो खाता भएका सबै बैंकबाट यस्तो कार्ड लिएर सुविधा लिन पाउने छैनन् । ग्राहकले कुनै एक बैंकबाट मात्रै यस्तो कार्ड लिन सक्नेछन् । यदि ग्राहकले यस्तो कर्ड लिएर दुरुपयोग गरेको ठहरिएमा विदेशी विनिमय ऐन २०१९ अनुसार कारवाहि गरीने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत चैत ८ गते एकिकृत निर्देशिका २०७६ मा संशोधन गर्दै भुक्तानी प्रयोजनको लागि ५०० डलरसम्मको प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको यहि व्यवस्थापछि बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई यस्तो सुविधा दिन सुरु गरेका हुन् ।